RØDE waxay siideysaa istuudiyaha waxsoosaarka Podcast! | Martech Zone
RØDE waxay siideysaa istuudiyaha waxsoosaarka Podcast!
Talaado, Disembar 11, 2018 Talaado, Disembar 11, 2018 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabaha aanan ku wadaagi doonin qoraalkan ayaa ah inta lacag iyo waqti ah ee aan ku qaatay soo iibinta, qiimeynta, iyo tijaabinta qalabka podcasts-kayga. Laga soo bilaabo fiicni iyo istuudiyaha, ilaa istuudiyaha is haysta oo aan ku qaadan karo boorsada dhabarka, illaa iyo makarafoonka USB waxaan ku duubi karaa laptop-ka ama iPhone… Dhammaantood waan isku dayay.
Dhibaatada ilaa maanta waxay had iyo jeer ahayd isku dhafka istuudiyaha iyo martida fog. Waa arrin caynkaas ah oo xitaa aan la xiriiray qaar ka mid ah soo saarayaasha si aan u arko haddii aan qof ka heli karo dhisme nooc ah.
Ma aha dhibaato isku dhafan, laakiin waxay u baahan tahay xoogaa qalab jilicsan. Markaad martida kala duwan leedahay marka lagu daro martida fog, daahida martida fog waxay sababi doontaa dhawaq codkooda ku aadan maqalkooda. Marka, waa inaad abuurtaa bas ka tagaya codka martida fog ee wax soo saarkii iyaga dib loogu celiyo. Tan waxaa loo yaqaan isku-dhaf.
Laakiin ma awoodi karo inaan ku dhajiyo agagaaraha barnaamijka wax lagu kariyo ee wadada marka lagu daro dhammaan qalabka, sidaas darteed waxaan ogaaday sida loo abuuro isku qaabeyn adoo adeegsanaya bas dalwad leh oo ku socda barnaamijkayga 'MacBook Pro'. Oo weli waa xanuun ku jira badhida si loo dejiyo.
Taasi waa la beddelay.
Hadda, qof kasta oo leh riyo ah inuu abuuro boodhadh tayo-xirfadeed leh ayaa awood u yeelan doona inuu si muuqata u sameeyo barnaamijkan cusub ee awoodda badan. Tani waa jihada cusub ee cajiibka ah ee RØDE: istuudiyaha dhammaan-hal-loogu talagalay Podcasters-ka heer kasta.
Waxaan booqanayay maanta sawir qaade aniga, Ablog Cinema, wuxuuna i weydiin lahaa hadaan arko kan cusub RØDECaster Pro - Istuudiyaha Waxsoosaarka Podcast. Waa kuwan muuqaalka guud.
Laakiin sug… wax badan ayaa jira. Waa kuwan faahfaahin faahfaahsan:
RØDE miyuu ka fikiray wax walba? Waxyaabaha ku jira guddiga waxaa ka mid ah:
4 kanaalada mikrofoonka: Class A, talooyin ku saleysan adeegga oo awood u leh inay awood u yeeshaan makarafoonada isweydaarsiga istuudiyaha iyo sidoo kale makarafoonada firfircoon ee caadiga ah.
Gelitaanno gooni ah oo loogu talagalay 3.5mm TRRS (taleefan ama qalab), Bluetooth (taleefan ama qalab) iyo USB (loogu talagalay muusikada / codka ama wicitaanada barnaamijka)
Telefoon iyo wicitaano app - oo aan lahayn dhawaq (isku-darka). Si fudud u hagaaji heerarka - ma jiraan qalab dheeri ah ama qalab qasan oo ku lug leh.
Pads-ka saameynta dhawaaqa barnaamijka ah: 8 midab koodh saamaynta dhawaaqa kiciya oo loogu talagalay jilayaasha barnaamijyada iyo saamaynta dhawaaqa.
Waxaa lagu barnaamijin karaa RØDECaster ™ Pro ama kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya barnaamijka.
APHEX® Xiiso badan ™ iyo Gunta hoose Bigfarsamaynta loo yaqaan 'patent processing' taa oo hodan ah, cod diiran oo keliya laga helay nidaamyada baahinta xirfadeed. Waxa kale oo ku jira firfircoonida multistage: isku soo ururin, xaddidaad iyo qayilaad-dhawaaq.
Taabasho-shaashad Waxay u oggolaaneysaa si fudud xakamaynta dhammaan goobaha, oo ay ku jiraan horudhaca barbaraha ee codadka xirfadeed ee kala duwan.
Afar wax soo saar sameecadeed oo awood sare leh iyo af haye maqal ah, mid kasta oo leh xakameyn mug mug leh.
Diiwaanada tooska ah ee microSD Card hawlgalka gabi ahaanba iskaa ah, ama kombiyuutarka aad doorbideyso iyo softiweerka adoo adeegsanaya USB.
Awooda socodka tooska ah.Raadiyaha maanta!
Tani ma ahan wax gaaban oo la yaab leh! Haysashada kanaallada codka la barbardhigi karo waxay ii oggolaaneysaa inaan horay u sii baro qorshahayga, bannaanka, iyo xayeysiisyada duulimaadka si aan macno ahaan ugu duubi karo uguna soo gudbin karo hoygeyga 'podcast hosting'.
Ka warran Muuqaalka Tooska ah?
Faa'iidada kale ee cutubkani waa awoodda lagu lammaaneeyo nidaam la mid ah Istuudiyaha Furaha. Soosaarka rikoodhku wuxuu kaxayn karaa codka qalabkaaga kuxiran nolosha oo waxaad dib ugulaabankartaa ugana horeysaa inta udhaxeysa ipad iyo martidaada adoo adeegsanaya iPhone FaceTime ama wicitaan Skype ah!
Waxaan hayaa safar sanadka dambe si aan waxbadan u duubto Faylasha faylasha iftiinka leh ee Dell… Iyo cutubkan ayaa ila socon doona. Cutubku culeyskiisu waa in ka badan 6 rodol sidaa darteed ma noqoneyso wax aad u xun oo lagu wareego. Kudar makarafoonada, fiilooyinka, iyo samaacadaha waxaana laga yaabaa inaan u baahdo inaan wax ku helo shaagag, laakiin taasi waa caadi.
Haddii aan hal cabasho qabo waxay noqonaysaa in cutubku uusan rikoodh badan hayn doonin. Marka, haddii martidu qufacdo inta martida kale hadlayso… waad ku dhegsan tahay ama waxaad u baahan tahay inaad joojiso bandhigga oo aad dib u habayn ku sameyso qaybta, ka dibna isku dheji qaybaha qaybaha wax soo saarka boostada Aynu rajaynno in noocyada soo socda ay awood u siinayaan duubista waddo-badan oo loo maro kaarka micro-SD iyo wax soo saarka USB.
U dukaamee barnaamijka 'RØDECaster Pro' ee Sweetwater
Tags: Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaistuudiyaha PodcastcasaanRØDECasterUSBUSB-c
Adeegyada Websaydhka Amazon: Intee Ayuu Wayn Yahay AWS?